Sida Loo Bilaabo Meherad South Carolina 2022: Hagaha Ugu Dambeeya
Bogga ugu weyn Sida Loo Bilaabo Meherad South Carolina 2022: Tusaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Sida Loo Bilaabo Meherad South Carolina 2022: Tusaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Waxaa lagu taxay tobanka dawladood ee ugu horreeya Pro-Business-ka Mareykanka, ka-bilaabidda ganacsi South Carolina waa xulasho aad u wanaagsan ganacsatada.
Iyada oo leh jawiga saaxiibtinimo ganacsi ee gobolka, mid ayaa kori kara oo ballaarin kara nooc kasta oo ganacsi ah oo ka bilaabma lahaansho gaar ah, iskaashi, shirkad, iyo Shirkadda Xaddidan ee Xadidan, ama LLC. Laakiin, sidee baad ku bilaabi kartaa?
South Carolina ayaa dhaqaale ahaan kobcaysay tobankii sano ee la soo dhaafay. Tirakoobyadu waxay muujinayaan in Waxsoosaarka Guud ee Guud (GDP) ee gobolka sannadka 2019 uu ahaa $ 213.45 bilyan.
Marka laga reebo jawiga dhaqaale ee xooggan, SC waxay siisaa meherado cusub faa'iidooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin rajada kobaca ee suuqyada tartanka, kharashaadka hawlgalka ganacsiga hoose, iyo qaar kaloo badan.
Waxaad saf u geli kartaa faa'iidooyinka adiga oo raacaya tusaheena fudud ee tallaabo-tallaabo ah oo aad ku gasho waddada degdegga ah ee madaxbannaanida maaliyadeed iyo shakhsiyeed.
Xaqiiqooyin Ku Saabsan South Carolina
South Carolina waa gobol ku yaal gobolka Koonfur -bari ee Mareykanka. Waxaa xuduud la leh waqooyiga North Carolina, koonfur -bari dhanka Badweynta Atlantic, iyo koonfur -galbeed Georgia oo ka gudubta Wabiga Savannah. South Carolina waa 40 -aad ee ugu ballaaran iyo 23 -aad ee ugu dadka badan Mareykanka.
South Carolina waxay leedahay dhaqaalo kaladuwan wax soo saarkeeda Warshadaha waxaa ka mid ah alaabada dharka, alaabada kiimikada, alaabada waraaqaha, mashiinada, gawaarida, alaabada baabuurta iyo dalxiiska. Wax -soo -saarka ugu weyn ee beeraha ee gobolka waa tubaakada, digaagga, cudbiga, lo'da, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, digirta, cawska, bariiska, iyo doofaarka.
Sida laga soo xigtay Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha, laga bilaabo Maarso 2012, South Carolina waxay lahayd 1,852,700 shaqooyin aan xaaraan ahayn kuwaas oo 12% ay yihiin wax soo saar, 11.5% waxay ku jiraan firaaqada iyo soo dhoweynta, 19% waxay ku jiraan ganacsiga, gaadiidka, iyo adeegyada, iyo 11.8% waxay ku jiraan adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka. Qeybta adeegga ayaa u dhiganta 83.7% dhaqaalaha South Carolina.
Shirkado badan oo waaweyn ayaa u guuray goobahoodii South Carolina iyagoo abuuraya fursado ganacsi iyo fursado shaqo dadka deggan gobolka.
Waa maxay sababta ay tahay inaad ganacsi uga bilowdo South Carolina
Waa kuwan dhowr sababood oo ay tahay inaad tixgeliso inaad ganacsi ka sameyso South Carolina.
South Carolina waxay bixisaa dhowr dhiirigelin oo gobol iyo federaal ah, amaah, deeqo, dhibco canshuur, iwm, oo ay heli karaan shirkado yaryar iyo kuwo dhexdhexaad ah. Aynu si dhow u eegno dhiirrigelinta ugu caansan ee loo heli karo ganacsiyada. source: incparadise.net
Dhibcaha Canshuurta: Waxaa jira dhibco canshuureed oo kala duwan oo ay hay'ad ganacsi ka faa'iideysan karto iyo qaar ka mid ah barnaamijyada caanka ah waxaa ka mid ah Deynta Canshuurta Maalgelinta, Cilmi -baarista & Deynta Canshuurta Horumarinta, Deynta Canshuurta Kordhinta Mugga, Dhibcaha Canshuuraha Shaqooyinka, Xarunta Shirkadda, iyo Hantidhowrka Canshuuraha ee Xarunta Shirkadda , iyo kuwo kale.
Dhiirrigelinta Canshuurta Iibinta iyo Adeegsiga: Dhiirrigelinta canshuurta iibinta iyo adeegsiga ayaa la bixiyaa iyadoo loo eegayo aagga hawlgalka ee meheradda, taas oo ah-Iibinta Gobolka-ka-baxsan ama Iibsashada Gobolka-ka-baxsan. Ka -dhaafitaannada Canshuurta Iibka ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijkan dhiirrigelinta ah. Waa inaad iska diiwaangelisaa ganacsi cusub South Carolina si aad uga qayb qaadato barnaamijyada dhiirrigelinta.
Dhiirrigelinta Canshuurta Hantida Deegaanka: Tan waxaa ku jira Ka-dhaafitaannada Canshuurta Hantida iyo Dhiirrigelinta sida 5-Sano Ka-dhimista Canshuurta Hantida ama Deynta Soo-nooleynta Dharka.
Daqiiqado Majiro: LLC looma baahna inay ilaaliso daqiiqado rasmi ah ama qaraarro marka loo barbar dhigo shirkad, sidaas darteedna u sahlaysa inay shaqeyso
Deegaan ku habboon bilowga
Iyada oo ay jiraan ganacsato badan oo South Carolina ah, dhulku aad buu ugu habboon yahay bilowga. Tani waa sababta oo ah nidaamka caafimaad-saaxiibtinimo leh oo caafimaad qaba oo bogaadinaya tartanka.
South Carolina waxay dejisay dhowr faa'iidooyin canshuureed iyo dhiirigelin si ay gacan uga geysato yareynta culeyska saaran milkiileyaasha ganacsiga yar yar. Ganacsiyada cusubi waxay ku shaqeeyaan canshuur la'aan haddii ay ku yaalliin ama u dhow yihiin jaamacado ku yaal gobolka.
Sidoo kale, Barnaamijka Deynta Cashuurta ee Suuqyada Cusub wuxuu lacag siiyaa ganacsiyada iyo kuwa guryaha dhisa si loo abuuro shaqooyin loona kobciyo horumarinta bulshada xaafadaha dakhligoodu hooseeyo ee South Carolina oo dhan.
Haddii aad leedahay xirfado cunto -karin oo wanaagsan waxaad South Carolina ka bilaabi kartaa Meherad Cunto: raac tilmaamahayaga sida loo bilaabo Ganacsiga Gawaarida Cuntada.
Heerka deegaanka iyo gobolka, hay'adaha sharciyeynta ayaa taageero siiya ganacsiyada jira iyo kuwa cusub iyada oo loo marayo helitaanka raasumaalka hal -abuurka iyo mashaariicda koritaanka.
Sahaminta faa'iidooyinka iyo ogaanshaha sababahaaga aad u rabto inaad ganacsi ka bilowdo South Carolina waxay kaa caawin doontaa inaad dhiirrigeliso, xitaa haddii aad la kulanto caqabado jidkaaga ah. Dhiirrigelintani waxay kuu sahlaysaa inaad ka gudubto dib -u -dhac kasta oo aad kor ugu qaaddo ganacsigaaga nadaafadda si aad ugu guulaysato.
Immisa ayee ku kacaysaa in laga bilaabo ganacsi South Carolina
Si aad ugu abuurto LLC -gaaga gobolka South Carolina, waxaad u baahan doontaa inaad u gudbiso Maqaallada Ururka Xoghayaha Gobolka South Carolina iyo khidmadda xereynta $ 100. Haddii aad internetka ku xaraysato, khidmaddu waa $ 95. Si aad u dhammaystirto dukumiintiyada, waxaad u baahan doontaa inaad ogaato macluumaadka soo socda: Magaca iyo cinwaanka LLC -gaaga.
Sida Loo Bilaabo Meherad South Carolina-Tilmaan-tallaabo Tuse
Waa kuwan tillaabooyinka aad u baahan tahay si aad u bilowdo ganacsi kuu gaar ah South Carolina.
XIDHIIDHKA: Waa kuma Ciyaaryahanka ugu mushaarka badan NBA -da? | 15 Ugu Fiican
#1: Dooro Fikrad Ganacsi
Tallaabada ugu horreysa ee lahaanshaha meheraddu waa go'aaminta nooca ganacsi ee la bilaabayo. Raadi fikrad ku habboon danahaaga, yoolalkaaga shaqsiyeed, kartidaada dabiiciga ah, xirfadaha, iyo sababta aad u rabto inaad u abuurto meheradda. Waa inaad sidoo kale qiimeysaa suurtogalnimada guusha oo ku saleysan danaha iyo baahiyaha bulshadaada. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad dhiirrigeliso marka arrintu adkaato waxayna si weyn u hagaajin doontaa fursadahaaga guusha.
#2. Qorshee Ganacsigaaga
Waad ogtahay waxay yiraahdeen, "haddii aad ku guuldareysato inaad qorsheysato, waxaad qorsheyneysaa inaad guuldareysato." Ganacsiyada guuleysta waxaa lagu dhisaa qorshe taxaddar leh.
Si aad u hesho hagitaan habboon marxalad kasta oo bilowga iyo maaraynta meheraddaada, waxaad u baahan tahay qorshe ganacsi. Waa sharraxaad qoran oo ku saabsan mustaqbalka ganacsigaaga. waxaa ku jira hadafka meheraddaada wuxuuna kuu sheegayaa waxa aad qorshaynayso inaad samayso iyo sida aad u qorshaynayso inaad u qabato.
Markaad samaysato qorshe, waxaad yeelan doontaa fikrad wanaagsan oo ku saabsan kharashyada bilowga ah, tartankaaga, iyo xeeladaha lacag samaynta. Maalgashadayaasha iyo amaahiyayaashu waxay ku weydiin doonaan inay dib u eegaan qorshahaaga ganacsi kahor intaanay bixin kaalmo dhaqaale.
Markaad qorsheynayso meheraddaada, tixgeli waxyaabaha soo socda:
Horumarinta Product: Si taxaddar leh u qor dhibaatada ganacsigaagu xallin doono, iyo waliba waxa badeecaddaada ama adeeggaaga ka reebi doona tartanka
Iibka & Suuqgeynta.
Dadka iyo Shuraakada: Waa maxay doorarka aad u baahan tahay inaad shaqaalaysiiso iyo xiriirka xirfadeed ee aad u baahan tahay inaad samaysato si aad ugu guulaysato.
Qorsheynta Maaliyadda: Tirada macmiisha ama iibinta aad u baahan doonto si aad u jebiso xataa. Intee in le'eg ayay lacag ku qaadan doontaa in halkaas lagu tago, iyo xaggee ayaad ka heli doontaa maalgelinta?
#3. Go'aanso Qaab -dhismeedka Sharciga
Samaynta qaab -dhismeed sharciyeed ee meheraddaada ayaa gacan ka geysaneysa aaminaadda kordhaysa waxayna ka ilaalinaysaa ganacsigaaga mas'uuliyad shakhsiyeed haddii ay dhacdo in meheraddaada la dacweeyo.
Qaab dhismeedka sharci ee ugu caamsan ee ganacsi yar waa:
Kartida kalida ah
Shirkadda mas'uuliyadda xadidan (LLC), iyo
Dooro qaab dhismeedka hay'ad ganacsi oo bixisa nooca ilaalinta mas'uuliyadda aad rabto iyo canshuurta ugu fiican, maalgelinta, iyo faa'iidooyinka maaliyadeed ee adiga iyo ganacsigaaga.
#4. Dooro Magac
Shirkadaha xaddidan ee xaddidan (LLC -yada) iyo shirkadaha, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in magacaagu ka soocan yahay magacyada hay'ado ganacsi oo kale oo horay ugu jiray faylka Xoghayaha Gobolka South Carolina (SOS).
Waxaad ka hubin kartaa magacyada la heli karo adiga oo raadinaya magaca meheradda websaydhka SOS. Waxaad kaydin kartaa magac la heli karo muddo 120 maalmood ah adiga oo SOS ka xereynaya codsi boos celin. Waxaa jira shuruudo magac oo gaar ah oo loogu talagalay LLC -yada iyo shirkadaha (sida ay ku jiraan eray sida “LLC” ee LLC -yada ama “Shirkadda” shirkadaha).
Haddii aad qorsheyneyso inaad ganacsi ku sameyso internetka, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad iska diiwaangeliso magacaaga ganacsi sidii magac domain. Hubi inaad internetka ka hubiso si aad u ogaato haddii magacaaga ganacsi loo heli karo sidii degel shabakad. Xitaa haddii aadan qorsheyneynin inaad maanta sameysato degel ganacsi, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad iibsato URL si aad uga hortagto kuwa kale inay helaan.
#5. Codso Ruqsadaha iyo Ruqsadaha
Codsiga ruqsad siinta iyo ruqsadaha ayaa daboolaya hababka soo socda.
Ma tahay alaab aad rabto inaad ku iibiso South Carolina? Waa inaad iska diiwaangelisaa Waaxda Dakhliga (DOR) si aad u ururiso canshuurta iibka.
Miyuu ganacsigaagu yeelan doonaa shaqaale? Waa inaad iska diiwaangelisaa DOR cashuur -dhaafiyaha loo -shaqeeyaha. Waxaad iska diiwaangelin kartaa labada nooc ee canshuurta, iyo sidoo kale canshuuraha kale ee ganacsiga, adoo soo gudbinaya Foomka BT-1, Codsiga Canshuurta Ganacsiga, khadka tooska ah iyada oo loo marayo qaybta Codsiga Canshuurta Ganacsiga ee mareegaha DOR.
Haddii meheraddaada si gooni ah canshuur looga qaado ama ay shaqaale leeyihiin, waa inaad ka heshaa Lambarka Aqoonsiga Loo -shaqeeyaha ee federaalka (EIN) IRS. Xitaa haddii aan lagaa doonayn inaad hesho EIN, inta badan waxaa jira sababo ganacsi oo sidaas loo yeelo.
Bangiyadu waxay inta badan u baahan yihiin EIN si ay akoon ugu furaan magaca meheradda iyo shirkado kale oo aad ganacsi la leedahay ayaa laga yaabaa inay u baahdaan EIN si loo socodsiiyo lacagaha. Waxaad heli kartaa EIN markaad buuxiso arjiga onlaynka ah ee mareegaha IRS. Ma jirto lacag xereyn.
Ruqsadaha sharciyeynta iyo ruqsadaha
Qaar ka mid ah qaybaha ugu waaweyn ee daboolay ruqsadaha iyo ruqsadaha waa:
XIDHIIDHKA: Sida Loo Bilaabo Meherad Kaaliforniya 2022: Tusaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Ruqsadaha xirfadeed iyo kuwa xirfadeed
Ruqsad -siinta noocan ah ayaa daryeesha dadka ka shaqeeya dhinacyada kala duwan. Wakaaladda Shati -siinta Xirfadleyda ee gobolka (PLA) ayaa kormeerta qaar badan (oo aan dhammaan ahayn) guddiyada sharciyeynta gobolka iyo guddiyada.
Guddiyadaas iyo guddiyadaas ayaa iyagana mas'uul ka ah nidaaminta xirfadaha iyo shaqooyinka shatiga leh ee kala duwan. Qaybta Xirfadaha ee mareegaha PLA waxay taxayaan xirfadaha iyo shaqooyinka badan ee ay PLA kormeerto.
#6. Dooro Goob Ganacsi oo Hubi Soonayaasha
Dooro goob meheraddaada oo hubi xeerarka soonaha deegaanka. Kahor intaadan meel dhigin, dib u eeg kharashaadka ku socodsiinta meheraddaada meesha la rabo, oo ay ku jiraan kirada iyo korontada. Dib ugu noqo qorshahaaga ganacsi si aad u qiimayso haddii aad awoodi kartid meesha aad rabto inta lagu jiro bilaha hore ee shirkaddaada.
Sidoo kale, hubso in goobta loo qoondeeyay nooca ganacsigaaga. Waxaa laga yaabaa inaad u hesho xeerarka aagagga ee magaaladaada ama magaaladaada adiga oo dib -u -eegis ku sameeya qawaaniinta deegaankaaga oo aad la xiriirto waaxda soonaha ama qorshaynta ee magaaladaada.
#7. Gudbi oo Soo Sheeg Canshuuraha
Haddii aad bilaabayso ganacsi cusub ama aad iibsanayso mid hore u jiray, waxaad u baahan doontaa xoogaa macluumaad aasaasi ah oo ku saabsan Sharciga Canshuurta South Carolina iyo xeerarka.
Tilmaamaha Canshuurta ee South Carolina ee Ganacsigu wuxuu sharraxayaa habraacyada la raacayo iyo foomamka lagu xareynayo Waaxda Canshuuraha iyo Maaliyadda ee Gobolka South Carolina (Waaxda Canshuuraha). Daabacaaddan waxaa kale oo ku jira macluumaad qiimo leh kuwa iibsanaya meherad jirta ama ka iibsanaysa hanti ganacsi jira.
#8. Abuur bangiyada ganacsiga iyo xisaabaadka deynta
Isticmaalka bangiyada ganacsiga gaarka ah iyo xisaabaadka deynta ayaa muhiim u ah ilaalinta hantida shaqsiyeed.
Marka xisaabtaada shaqsiyeed iyo tan ganacsi la isku daro, hantidaada gaarka ah (gurigaaga, baabuurkaaga, iyo waxyaabaha kale ee qiimaha leh) ayaa halis ku jira haddii ay dhacdo in ganacsigaaga dacwad lagu soo oogo. Sharciga ganacsiga, tan waxaa loo yaqaanaa daloolinta xijaabka shirkaddaada.
Intaa waxaa sii dheer, markaad baratid sida loo dhiso sumcadda ganacsiga, waxaad ku heli kartaa kaararka amaahda iyo maaliyad kale adoo ku matalaya meheraddaada (halkii aad adigu lahayd), dulsaarka dulsaarka leh, khadadka sare ee sumcadda, iyo waxyaabo kaloo badan.
Waxaa jira laba tallaabo oo aad qaadi karto si aad u ilaaliso meheraddaada:
1. Furitaanka xisaab bangi ganacsi:
Wuxuu ka soocayaa hantidaada gaarka ah hantida shirkaddaada ee lagama maarmaanka u ah ilaalinta hantida shaqsiyeed.
Wuxuu fududeeyaa xisaabinta iyo cashuur celinta.
2. Qaado kaarka deynta ganacsiga:
Wuxuu kaa caawinayaa inaad kala saarto kharashyada shaqsiyeed iyo ganacsi.
Wuxuu abuuraa taariikhda amaahda shirkaddaada, taas oo waxtar u yeelan karta kor u qaadidda raasumaalka dambe (sida daymaha ganacsiga yaryar).
#9. Ku biir Xirfadleyda-Ururada
Ku biirista ururada xirfadda leh waxay ku siin doontaa fursad aad ku xiriirto- ma garan kartid meesha hoggaamiye ganacsi ka imaan doono. Markaa waa inaad u furan tahay inaad adeegyo isweydaarsato xirfadlayaal kale.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad heshid qiimayaasha caymiska ee la dhimay si aad uga mid noqoto ururadan midkood.
#10. Samee Joogitaanka Warbaahinta Internetka ama Bulshada
Abuuritaanka joogitaan onlayn ah oo iftiiminaya nooca adeegyada aad bixinayso waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu soo jiidan karo macmiisha iman karta adduunka maanta.
Warbaahinta bulshada ayaa kaalin weyn ka ciyaari karta sidii looga gudbi lahaa dhibaatadaas warshadeed iyagoo ku siinaya meel aad ku tilmaamto wanaagga shirkaddaadu sameyneyso. Xusuusnow, dib u eegista warbaahinta bulshada ayaa ah ereyga cusub ee afka.
Noocee Ganacsi Ayaan Ka Bilaabi Karaa South Carolina?
South Carolina waxaa ka buuxa bilowyo abuuraya moodallo ganacsi oo cusub, hormariya warshado cusub, oo la yimaada fikrado si togan u beddelaya dhaqaalaha.
Fikrad kasta oo ganacsi waxay noqon kartaa mid weyn oo guuleysata haddii ay xallineyso dhibaatada asaasiga ah ee dhagaystayaasha iyo abuurista qiimaha.
Halkan waxaa ah liiska fikradaha ganacsi ee yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah si ay uga bilaabaan South Carolina:
Qorsheeyaha Safarka Raaxada & Heshiisyada dhimista
Wakaalada Shaqaalaysiinta ee Gaarka ah
Adeegga Bixinta Ubax
Adeegga Nadiifinta Qalalan
Aqoon isweydaarsiga Baabuurka
Cuntada guriga lagu kariyey ee la kariyey xilliga qadada waa daaweyn laga cabsado dadka shaqada jooga, laakiin xaddididda waqtiga uma oggolaanayso inay muddo dheer u safraan. Bixinta adeeg ay ku qori karaan xirmo toddobaadle ah ama bille ah oo onlayn ah oo qadada la keeno maalin kasta, isla markiiba ka hor nasashada qadada waxay ganacsi weyn ku noqon kartaa South Carolina.
In kasta oo ay tahay waax horumarsan mar hore, kor u qaadista adeeggaaga dalabyo gaar ah ayaa kuu keeni kara saldhig macmiil oo weyn. Ha ku dhejin oo kaliya safarrada dibedda, safarka raaxada, iyo heshiisyada caalamiga ah ee dalxiiska, laakiin sidoo kale hel meelo qalaad si aad uga sahamiso meel u dhow ama gobolka oo dhan!
Taajiriinta South Carolina waxay leeyihiin waxyaabo badan oo ay ka fekeraan. Mararka qaarkood ma siiyaan fiiro ku habboon hantidooda waxayna ku adkaataa maaraynta. Soo hel oo u soo bandhig adeegyadaada gaarka ah!
XIDHIIDHKA: 15 Podcastters -ka ugu Mushaharka Badan | 2022 Faallooyinka
In kasta oo hay'adaha shaqaalaysiinta ay aad u badan yihiin, iyo joogitaanka marinnada shabakaduhu waxay ka dhigaan suuq buuxa, haddana waxaa jira farqi weyn oo u baahan in la buuxiyo. Shirkadaha shaqaalaysiinta ee gaarka ah aad bay u yar yihiin maadaama ay adeegyadooda u fidiyaan warshado aad u yar. Qabso laba ama saddex warshado oo khuseeya oo samee joogitaankaaga gaarka ah oo leh qiimeyn ka wanaagsan.
Walaaca ugu weyn ee waalidiinta shaqeeya ayaa ah badbaadada iyo amniga carruurtooda marka ay shaqada u maqan yihiin. Markaa, xarumaha xanaanadu waxay siiyaan ikhtiyaarka ugu fiican iyaga. Ma aha oo kaliya inay hubiso in ilmuhu ammaan yahay, laakiin waxay kaloo ka dhigaysaa inay bartaan waxyaabo wanaagsan.
Maadaama ay dadku aad ugu mashquulsan yihiin noloshooda xirfadeed oo ay adag tahay in waqti loo helo daryeelka guriga. Markaa, xaaladaha noocaas ah, ikhtiyaarkaa hablaha, adeegga nadiifinta, iyo shaqooyinka gacan -yaraha ayaa ku imanaya mid la heli karo oo la awoodi karo. Aasaasidda shirkadan oo kale waa mid sahlan waxayna caddayn kartaa inay aad ugu guulaysatay muddo gaaban gudaheed.
Waxaa jira sababo badan oo loogu dabbaaldego nolol -maalmeedka, cunnada fudud iyo keeggu waxay qayb muhiim ah ka yihiin dhammaan dabbaaldegyada. Haa, waxaa jiri kara tobanaan kale oo bixiya adeegyo isku mid ah, laakiin haddii aad tahay qof xirfad u leh xirfadda, waxaad ku heli kartaa qayb weyn oo suuq ah olole xayeysiis Facebook oo fudud xitaa.
Maaddaama ay jiraan sababo badan oo loogu dabaaldego dhacdooyinka maalin kasta, waxaa jira siyaabo aad u badan oo sidaas loo sameeyo. Bouquet waa mid ka mid ah siyaabaha ugu awoodda badan ee lagu muujiyo farxaddaada marmar, laakiin qofna mar walba ma awoodi karo inuu aado ubaxle! Tani waa waxa ka dhigaya fikrad ganacsi oo la yaab leh.
Post la xiriira: Sida Loo Bilaabo Boutique Online ah 2022: Hagaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Iibinta Amazon iyo eBay waa hab deg deg ah oo wanaagsan oo lagu bilaabi karo ganacsigaaga internetka, laakiin waa inaad haysataa wax laga cabsado oo lagu iibiyo qiimo la yaab leh si aad ugu guuleysato meheradda.
Haddii aad khibrad u leedahay nuxurka, suuqgeynta, ama horumarinta webka, waxaad samayn kartaa boqortooyo kuu gaar ah waqti xaddidan. Ha ahaato wakaalad ka kooban, xariir shabakad ganacsi, ama madal suuqgeyn. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa badeecad/adeeg soo jiita dhagaystayaal badan!
Si aad kor ugu qaaddo shirkaddaada, waxaad ku abuuri kartaa fiidiyaha suuqgeynta sameeyaha fiidiyowga ganacsiga makewebvideo.com.
Isbeddelka ganacsi abuurka ayaa kor u qaaday baahida loo qabo in la iibsado meherado dhisan oo buuxiya shuruudaha ganacsiga ee macaamiisha iyo wax kaloo badan. Tani waxay si habboon ugu habboon tahay dallaalnimada ganacsiga. In kasta oo beertan ay waxyar ka adag tahay oo kakan tahay una baahan tahay khibrad B2B, waxay kuu caddayn kartaa inay faa'iido kuu leedahay.
Si aad u daboosho baahida sii kordheysa ee waaxda caymiska, waxaad u dhaqmi kartaa wakiilka shirkadda caymiska oo aad kasban kartaa faa'iidadaada.
Sida cunto karinta iyo nadiifinta, dhar dhaqistu waa hawl kale oo daal badan oo waqti badan qaadata shaqaalaha dabaqadda, waxaadna arki doontaa dadweyne badan oo had iyo jeer raadinaya siyaabo ay uga fogaadaan inta karaankooda ah. Haddii aad ka fekereyso qorshaha meheradda dhar -dhaqashada, markaa tixgeli in soo -qaadista iyo adeegga gudbinta dharka ee guurguura ay si wanaagsan uga hadlaan welwelka dharka.
Halkan waxaa ah talooyin ku saabsan sida loo bilaabo oo loo maamulo ganacsi nadaafadeed si guul leh.
Iyada oo ku xidhan deegaanka iyo dhagaystayaasha la beegsanayo, waxaad bilaabi kartaa ganacsi bixiya adeegyo badan, ama waxaad u baahan kartaa inaad ku dhegto saloon timo oo kaliya!
Ku-lahaanshaha aqoon-is-weydaarsiga baabuurta guur-guura ee gobolka ay baabuurtu ku yaalliin kuma siin doonto oo kaliya faa'iido tartan, waxay kaloo xallin doontaa arrin waayeel ah.
Aqoon isweydaarsiga guurguura ayaa bixin kara caawinta ugu habboon dhammaan kiisaska oo ay ku jiraan xaaladaha degdegga ah wuxuuna u keeni karaa aqoon -is -weydaarsiga macaash badan iyo macaash.
Waxaa jira faa'iidooyin gaar ah oo la xiriira bilaabida ganacsi South Carolina. Haddii aad si xeeladaysan u fekerto oo aad uga faa'iidaysato fursad kasta si aad u yarayso kharashaadka adiga oo sare u qaadaya qiimaha aad ku kordhiso macaamiisha, waxaad dhisi kartaa aasaas u ah guusha ganacsi ee muddada dheer ka jirta gobolka.
nolo.com- Sida Loo Bilaabo Ganacsi South Carolina
incparadise.net- Faa'iidooyinka ku -daridda Ganacsi South Carolina
en.wikipedia.org- Koonfurta Carolina
Sida Loo Bilaabo Meherad Laga Bilaabo Xoqitaanka 2022: Tilmaan-Tallaabo Tallaabo Fudud
Sida Loo Bilaabo Meherad ku taal Arizona 2022: Tusaha ugu dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Sida Loo Bilaabo Meherad New York 2022: Tusaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Sida Looga Saaro Amniga Dharka
Goobaha Muusikada ee ugu sarreeya 13 ee aan Xannibnayn ee Dugsiyada iyo Kulliyadaha
10 Fikradaha Ganacsi ee Ugu Lacag Badan Mumbai 2022
Haddii aad raadinayso fursad aad ganacsi kaga bilowdo Hindiya, Mumbai waa mid ka mid ah…
Waa maxay Ururka Amaahda? Sidee U Shaqeeya?
Ururka deyntu waa iskaashato maaliyadeed oo ay xubintu leedahay oo ay maamulaan xubnahooda oo ku shaqeeya…
Sida Si Fudud Baabuurka Loogu Iibiyo California: Tillaabo-Tallaabo Hagaha
Haddii aad isu diyaarinayso inaad cusboonaysiiso gaadhigaaga hadda oo aad mid cusub iibsato ama aad si fudud u rabto…
Waa imisa Qiimaha Caymiska E iyo O
Waa imisa qiimaha caymiska eo? Dunida ay macaamiishu rabaan in heshiis ganacsi kasta uu u dhaco sida…